Iko kuyedza kunoratidza kuti AirTag iri pamusoro peTile | Ndinobva mac
AirTags haimbomira kutishamisa. Dzimwe nguva zvirinani uye dzimwe nguva kwete zvakanyanya. Kana mazuva mashoma apfuura kuyedzwa kweye muongorori weApple kwakabuda muWashington Post uye haina kusiya zvigadzirwa zvekambani zvakanyatsonaka, ikozvino isu tine rumwe ruzivo rutsva rwakavakirwa pazviitiko chaizvo. Vakagadzirira kuenzanisa iyo AirTag neTile nekugadzira vese vari vaviri kubva panharembozha. Zvinotora nguva yakareba sei kuti uwane imwe uye imwe?
Kubva Techradar, iyo magazini inoshanda muApple uye tekinoroji, yakasarudza kutsvaga kana AirTag kana Tile yaizowanikwa pekutanga, nemaune ichisiya imwe neimwe pasingasvikike yeiyo smartphone. Yakanga yakatarwa zvakatora nguva yakareba sei kuti imwe neimwe izivikanwe nevamwe vashandisi. Kuedzwa uko vazhinji vedu taive nako mupfungwa asi kuti isu hatina kumbobvira tayedza kuongorora kana kuita nekuda kwenjodzi dzinosanganisira (kunyanya kubuda muAirTag).
1 Maminitsi makumi matatu eAirTag. Maawa gumi nemaviri kuTile.
2 Ndeipi mhedzisiro inosvika mushure mekuyedza?
Maminitsi makumi matatu eAirTag. Maawa gumi nemaviri kuTile.
Isu tinofungidzira kuti zvese zvishandiso, kunyange zviine basa rakafanana, zvinoshanda zvakasiyana. Iyo AirTag ine mushandisi base rekutenda kuti uwane Yangu uye iri nyowani kumusika. Nekudaro, Tile anga atove pamusika kwemakore mashoma. Ose ane zvazvakanakira nekuipira. Ndeupi waungatanga wawana?
TechRadar yakatumira zvese zviri zviviri "kuseri kwechiratidzo mumugwagwa wakabatikana, mamaira kubva kumba kwake" na9 mangwanani neMuvhuro mangwanani. Kudzokera kumba, ivo vaviri vakaisa chiratidzo sevakarasika, ndokubva vamirira. Tichifunga kuti ivo vaive vari kure renji.
Mumaminetsi makumi matatu chete, chiziviso chakaonekwa nenzvimbo yeiyo yakarasika AirTag, sezvo yaive yaonekwa neiyo inopfuura iPhone, kunyangwe nzvimbo yakapihwa yaive mugwagwa unomhanya uchienderana nekwatakange tamboiisa pakutanga, kunyangwe yaive ichiri munzvimbo yekutanga.
Chirevo chinoti zvakafanana alerta yakagamuchirwa ka13 zvachose pamaPhones akawanda akadarika. Vashandisi vayo vaive vaona yakashaikwa tracker. Zvakakosha, iyo nzvimbo yakapihwa yakagadziridzwa zvishoma nguva imwe neimwe. Mugwagwa uri padyo wakatarisana wakatarwa panzvimbo paya pakasiiwa AirTag. Icho chimiro chakatsvaga chekutsvaga zvinhu zvakagadzirwa neApple uye zvinofambiswa neiyo Ultra Wideband tekinoroji, yaizogadzirisa uku kushomeka kwenzvimbo chaiyo kana isu tichiedza kutsvaga zvakarasika zvinhu.
Zvisinei uye hezvino panouya izvo zvinoshamisa, ndezvekuti zvakaitika «Anenge maawa gumi nemaviri» mumwe munhu munharaunda yeTile asati azviona. Zvino zvisinei, kusiyana neAirTag, iyo nzvimbo yakapihwa yanga yakanyatsojeka kupfuura kubva kuAirTags.
Ndeipi mhedzisiro inosvika mushure mekuyedza?
Nhengo dzeTechradar dzakagumisa kuti, kana iwe uri kunze kwenzvimbo yekutevera kifaa chako, iwe unogona kuwana AirTag nekukurumidza kupfuura Tile. Izvi zvinokonzerwa nehukuru hwenzvimbo iyo ndeya iPhone. Chii chiri chokwadi ndechekuti kuti uone AirTag, iyo iPhone kana iPad, iwe unofanirwa kumhanya iOS 14.5, yazvino vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu, uye uwane iyo yangu iPhone basa riitwe.
Sezvinotaurwa neshumo, kuwanda kweIOS, uye kunyanya iOS 14, kwakadaro AirTag yatove yakasimba kwazvo tracker kunyangwe uchingova nemavhiki mashoma, nekuda kweApple's FindMy tekinoroji uye ecosystem yayo.
Asi zvinofanirwa kutariswa kuti iko iko kugona kuwana iyo yakarasika AirTag gare gare inosiya zvakawanda kudiwa. Zvinogona kuve nyore mumba yekutandarira yeimba yedu uye hazvina basa kuti kune lag yemamita akati wandei. Asi mumugwagwa, iyo nhamba inogona kukanganisa zuva rako. Kune zvimwe zvinhu zvekunze zvinokanganisa kunyatso. Ah zvakanaka. zvirinani mumaminetsi makumi matatu pane kwete mumaawa gumi nemaviri, hongu. Zvirinani kundizivisa kare uye wozoshandisa nguva inodiwa kutsvaga chinhu pane kusamirira hafu yezuva kuti uwane makiyi, semuenzaniso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iko kuyedza kunoratidza kuti AirTag iri pamusoro peTiles
Safari Technology Preview 124 yave kuwanikwa
Mj Rodriguez Vanotamba NaMaya Rudolph PaNew Comedy Series